शंकाको घेरमा परेका नेपाल अडानबाट किन बिच्किएनन् ? | DNFMEDIA
शंकाको घेरमा परेका नेपाल अडानबाट किन बिच्किएनन् ?
काठमाडौं । नेकपा एमालेका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाललाई धेरैले अडान नभएको र बेलाबेला विचार परिवर्तन गरिरहने नेताका रुपमा चित्रण गरेका थिए तर यसपालि पाँचदलीय गठबन्धन टिकाएका छन् ।
पटकपटक एमालेका अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले देउवालाई प्रधानमन्त्री बन्नका लागि दिएको समर्थन फिर्ता लिन आग्रह गरे पनि नेपालले मानेनन् अन्ततः नेपालकै जीत भएको छ । नेपालले यसलाई आफ्नोमात्र नभएर लोकतन्त्रको, संविधानको र समस्त नेपालीको खुशीको दिन भएको टिप्पणी गरेका छन् । नेपाल पक्षका २३ जना सांसदले गत जेष्ठ १० गते देउवालाई
प्रधानमन्त्रीमा समर्थन गरेका थिए । बीचमा नेपाल ओलीको लोभमा पर्छन् कि भनेर त्यही पक्षबाट शंका गरिँदै आए पनि अन्तिममा आएर उनले ओलीलाई सरकारबाट ढालेरै छोडेका छन् । नेपालले कडा अडान नलिएको भए यो राजनीतिक परिवर्तन पनि सम्भव थिएन ।
यसअघि पनि पार्टीमा पटकपटक विवाद हुँदा अन्तिम क्षणमा आएर कुनै न कुनै सहमति गरेर आफ्नो पक्षको भावनामाथि खेलवाड गरेका नेपालको अडानले नै देउवा प्रधानमन्त्री बनेका हुन् । नेपाललाई देशभरका आफ्ना पक्षका नेता तथा कार्यकर्ताले पनि कुनै पनि हालतमा ओलीसँग नझुक्न दवाव दिँदै आएपछि नेपाल पनि अडानमा अडिग भएका थिए । नेपालले ओलीलाई सच्याउनमात्र अरु दलसँग गठबन्धन गरेको र अहिले आएर आफ्नो लक्ष्य पूरा भएको स्पष्ट पारेका छन् । नेपालले पार्टीलाई एकताबद्ध बनाएर लान सकिने तर त्यसको लागि ओलकिो व्यवहार पार्टीमैत्री हुनुपर्ने धारणा राखेका छन् ।
ओलीले जुनसुकै निर्णय गर्दा पनि पार्टीभन्दा आफैं ठूलो हुँ भनेर गर्ने गरेकाले पनि ओली पार्टी र जनताबाट पटकपटक आलोचित बन्दै आएका छन् । ओलीले राजनीतिबाट पाउनुपर्ने सबै पद पाएका छन् र त्यसको फाइदा पनि उठाएका छन् तर कार्यकर्ताको राजनीति भने चौपट बनाइदिएका छन् ।
Previous: सन्की शासकले सिध्याएको संसद संविधानद्वारा स्वतः सुचारु
Next: विवादित बन्दै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी